Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo sheegtay in muddo bil ah ay ku soo koobeyso shirka Jowhar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo sheegtay in muddo bil ah ay ku soo koobeyso shirka Jowhar
MAREEG 10 May 2016
Jowhar ( Mareeg)-Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya Yaxye Cali Ibraahim oo warbaahinta kula hadlayay Magaalada Jowhar ee xarunta Gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa shaaca ka qaaday in wasaaradda ay dooneyso in muddo bil ah lagu soo koobo shirka maamul u sameynta labada Gobol.
Sida Xoghayaha uu cadeeyay Wasaaradda ayaa arrintaan uga golleh daruufo kala duwan oo isbiirsaday islamarkaana aan suura galineyn in intaas ka badan shirka uu sii socdo.
Sidoo kale Xoghayaha ayaa ka codsaday dhammaan ka qeyb galayaasha shirkaasi in ay sameeyaan isu tanaasul si loo dar dar geliyo dhismaha maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe.
Hadalka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya iyadoo weli is jiid jiid xoogan uu ka taagan yahay shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe.
Ciidanka nabad ilaalinta oo Gacan ku dhiiglayaal soo qabqabtey xaley
Gaari Waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo saakay lagu qabtay Magaalada Muqdisho